Magaalada Maalmo waxay ku saleysan tahay qiimeynta iyo talooyinka masuuliyiinta mas'uulka ka ah. Waxaan raacnaa horumarka dhacdooyinka waxaana diyaar u nahay inaan xoojino dadaalkeenna haddii loo arko ina loo baahan yahay.
Sidan ayey howlaha magaalada Malmö u dhacday
Sidan ayey howlaha magaalada Malmö u dhacday PDF (pdf, 156.8 kB)
Maktabadaha, Matxafyada Malmö iyo matxafka farshaxanka ayaa soo rogaaya xadidaada dadka ugu badan ee soo booqdeyaasha ah
Waxa ay magaalada Malmö macaamiisha maktabada ku boorinaysaa inay adeegga dhijitaalka ah isticmaalaan si ay ugu yareeyaan halista ay saxmad/ciriiri badan ku imaan karto. Xitaa Matxafka Malmö iyo Matxafka Farshaxanka ee Malmö ayaa sidoo kale soo roggay xadidaada tirada dadka soo booqdeyaasha ah ee ugu badan iyadoo Matxafyada Malmö ay sidoo kale xireen qeybaha/meelo uu booskoodu ciriiri yahay.
Hylliebadet iyo Oxievångsbadet
Hylliebadet iyo Oxievångsbadet ayaa sii furnaan doona, laakiin si saxmada/ciriiriga badan loogu yareeyo ayaa tiro kooban oo soo booqdeyaasha ah uun markiiba la sii dayn doonaa. Mararka qaar ayaa soo booqdeyaasha banaanka goobaha dabaasha ku sugi karaan.
Jiilaal bartamaha Malmö
"Jiilaalka magaalada dhexdeeda" waxa ay noqon doontaa mid ku habboon karoonada iyadoo waxoogaa iftiin ah oo dheeraad ah lagu xiraayo xilliga mugdiga jiilaalka. Inta u dhaxeysa 28 Nofeembar ilaa 3 Janaayo, ayaa dadka Malmö degan ay ka qeybqaadan karaan qurxinta bartanka magaalada iyo soo wareegiyada cuntada ee qoyska oo dhan.
Taageerada la siinaayo dadka dhibanayasha rabshada
Xadgudubka dadka xiriirka dhow wada leh ayaa sii kordhaaya marka dad badani guriga wada joogaan.
Koncept Karin waxay ay bixisaa talo iyo taageero la siinaayo qofka ka fikiraaya inuu dacwad booliiska u gudbiyo. Telefoonka 040-34 93 85 isniin-jimce 09.00–16.00, xilliga qadada inta u dhaxaysa 12.00–13.00. Waqtiyada kale booliiska la xiriir 114 14. Waxaad macluumaad dheeraad ah ka helaysaa: malmo.se/kriscentrum
Iskuulada iyo iskuulada barbaarinta
Dugsiga barbaarinta iyo iskuulada dhexe wali way sii furnaanayaan, marka loo eego warbixinnada hay’adaha (Maamulka Caafimaadka Dadweynaha). Carruurtu waxay yeeshaan astaamo sahlan, haddii xataa ay leeyihiin xaalad caadi ahaan ka mid dhigi karta kooxda halista ku jirta. Macluumaadka loogu talagalay waalidiinta leh carruurta dhigata dugsiga barbaarinta (pdf, 477.7 kB)
Waxa Iswiidhan ka jira dugsiga qasabka ah, iyadoo sharciga aasaasiga ahi uu yahay in carruurta caafimaadka qabtaa ay tahay inay dugsiga aadaan. Ardayda leh calaamadaha sida xumada/qandhada, qufaca ama dhibaatooyinka hawo mareenka/neefsashada waa inay guriga joogaan si loogu yareeyo halista faafitaanka cudurka. Taasi waxay sidoo kale khuseysaa calaamadaha khafiifka ah sida cune xanuun, duuf iyo xanuun murqaha iyo kala goysyada. Waa in muddo laba maalmood ah la ahaado bilaa calaamad ka hor intaan dugsiga lagu soo laaban. Haddii ilme uu jiradey ayuu dugsiga ku soo laaban karaan 7 maalmood ka dib markuu jiraday, xitaa haddii ay leeyihiin calaamadaha khafiifka ah ee sida qufaca qalalan ama duuf yar ayay ku soo laaban karaan haddii uu ilmuhu sidiisa kale caafimaad qabo. Warbixin quseyso ardeyda iyo waalidkooda markey noqoto dibmarka aad xanuun ka soo fiicnaatid ugu soo noqoshada iskuulka haddii isku aragtid calaamad ama (pdf, 100.3 kB)
Haddii uu arday xanuunsado xilliga dugsiga lagu jiro, waa inuu ardeygu sida ugu dhakhsaha badan gurigiisa aado. Shaqaalaha dugsiga ayaa qiimeyn doona haddii uu ardaygu kaligiis guriga aadi karo iyo haddii ay tahay inuu qol gaara joogo uu joogo ilaa inta shaqaalaha daryeelku u imaanayaan.
Hay'adda Folkhälsomyndigheten ayaa go'aansatey xeerar gaarka ee khuseeya dadka ku nool guryaha uu qof ka mid ahi qabo Covid-19. Waxay taas micnaheedu tahay in xubnaha qoysku ay guriga joogaan si ay kuwa kale ugu illaaliyaan. Ardayda dhigata xanaanada, dugsiyada hoose iyo dugsiyada kale ee u dhigma iyo sidoo kale dugsiyada sare ee khaaska ah ayaan hoos imaaneyn xeerarka gaarka ah laakiin way sii wadan karaan inay dugsiga aadaan xitaa haddii qof guriga ka mid ah uu qabo cudurka.
Wakaaladda caafimaadka Dadweynaha ee Mamulka dugsiyada waxay so bandigen inney dugisyasha sidodi ku celiyan marka laga bilabo 15 June.
Dugsiyada sare qaarkood waxay noqon doontaa qaar laga dhigto waxbarashada masaafada fog laga qaato ama hab waxbarasho oo casharada/waraaqaha laguu soo dirayo.Sidoo kale Komvux ayaa qeybo ka mid ah waxbarashada lagu dhigayaa masaafad fog. Dhammaan dugsiyadu waxay wali sii wadanayaan inay ka sii shaqeeyaan sidii looga fogaan lahaa in dad badan meel iskugu yimaadaan. Waxay taasi tusaale ahaan noqon kartaa talaabooyin si aanay saf/layn ugu imaanin qolka cuntada iyo sidoo kale in imtixaan qaadista loogu sameeyo si kooxo yar yar ah.
Ardayda dhigata dugsiyada sare ee magaalada Malmö ee masaafada fog (distans ) wax ku barata ayaa qadadooda dugsiga soo qaadan kara. Goobaha laga qaadanaayo ayaa lagu faafiyay guud ahaan Malmö si arday ka badan loogu siiyo fursada ay qadadooda ku soo qaadanayaan.
Laga bilaabo Noofembar waxa shaqeynaaya in ku dhowaad 25 boqolkiiba ardayda dugsiga sare ee dhigata barnaamijyada qaranku ay heli doonaan waxbarashada masaafada fog laga qaato ama hab waxbarasho oo casharada/waraaqaha laguu soo dirayo. Barnaamijyada soo galida (Introduktionsprogram) iyo dugsiga sare ee nooc dugsi u gaarka ah ardada caqliga dhiman (gymnasiesärskolan) ayaan ku jirin go'aanka.
Warbixinta tarmiinka dayrta 2020 (pdf, 167.9 kB)
Is diiwaangelinta SFI da ee bilaa balanta ee Föreningsgatan 7 ka dhacaysan ayaa la xirayaa inta u dhexeysa 9-20 Noofembar. SFI da ayaa qeybo ka mida ah waxbarashda lagu dhigan doonaa masaafad fog si looga hortago khatarta faafitaanka fayruska. Waxa weli suurtogal ah in la iska diiwaangeliyo dhijitaal ahaan iyo telefoon ahaan. Booqashooyin horay loo sii qabsaday ayaa la sameyn doonaa. Miyaad su'aalo ku sabsan SFI da iyo is diiwaangalinta qabtaa? Nala soo xiriir anaga. Telefoonka: 040-343335ama emayl ahaan sfi.komvux@malmo.se
Xataa bilaa balan imaanshahii xarunta la tilaamida/hagida dadka waaweyn (waxa loola jeedaa la talinta waxbarashada iyo xirfadda) ee ku taala Storgatan 20 ee Malmö ayaa sidoo kale la xiray. Waxqabadka waxa lagu heli karaa telefoon ahaan (040-34 49 95 isniinta–jimcaha saacadaha. 10-12 iyo 13-15), emayl (vuxvagledning@malmo.se ) iyo malmo.se
Guryaha hawlgabka, makhaayadaha, meelaha ay ku kulmaan waayeelka iyo LSS
Dadka soo booqanaaya guryaha daryeelka ayaa lagu boorinayaa inay soo wacaan. Sida qof kasta amaankiisa ku jirta ayaa soo booqdayaasha lagu dhiirrigelinayaa inay la soo xiriiraan guryaha daryeelka ka hor inta aanay soo booqan.
Af dhowre/af gashi daryeelka. Laga bilaabo 1 Oktoobar ayaa guryaha daryeelka ee ay dadka waayeelka ahi degan yihiin ayaa mar labaad dib ugu fureen booqashooyinka iyo soo booqdeyaasha. Si loogu ilaaliyo/badbaadiyo waayeelka iyo dadka jilicdasan, ayaa la go'aansaday in si ku meelgaar ah loogu soo roggo xidhashada af dhowre/af gashi ee daryeelka caafimaadka ee dhammaan xiriirada dhowdhow. Shaqaaluhu waxay xiran yihiin qalabka difaac ee jidhka oo dhan wada qariya haddii infegshan bukaanka ka dhaco.
Waxa dadka qaraabada ah wali xilliga booqashada sii shaqeynaaya waa sii waditaanka calaamado la'aanta, masaafada jidh ahaan la isku jirsanaayo iyo nadaafadda gacmaha oo laga taxadiro. Haddii dadka qaraabada ahi ay rabaan in la siiyo af dhowrka/af gashiga inay u ahaato tallaabo dheeraad ah oo badbaado ah, ayaanu taasi bixin doonaa.
Dhamaan dunida oo dhan oo ay xataa Iswiidhan ku jirto ayaa qaaditaanka infegshanka bulshada ee covid-19 uu sii kordhayaa. Si loogu ilaaliyo dadka waayeelka ah iyo kuwa jilicdasan, ayaa la go'aansaday in si ku meelgaar ah loogu soo roggo af dhowrka/af gashiga lagu isticmaalaayo daryeelka waayeelka dhexdiisa ee dhamaan* daryeelka wajiga agtiisa ah ama xaaladaha xanaaneynta (wax ka yar 1 mitir).
Kooxda-covid ee khaaska ah ayaa la bilaabayaa oo ay hawshoodu tahay la wareegidda daryeelka caafimaad ee guriga iyo daryeelka guriga ee loogu talagalay dadka adeeggan qaata ee muujiya astaamaha cudurka ama xaqiiqdii qaba caabuqa corona. Kooxda-covid waxay ka kooban yihiin kalkaaliyeyaal caafimaad, shaqaalaha jimicsiga jirka iyo shaqada iyo kalkaaliyeyaalsha hoose ee daryeelka guriga iyo daryeelka caafimaadka guriga ee degmada Malmö, iyo sidoo kale waxa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal caafimaad oo ka socda Gobolka Skåne.
Daryeelka kohort micnahiisu waa in bukaannada lagu daweeyo cisbitaallada ee laga daweynayo covid-19 in hadii loo baahdo wakhti kooban la geyn karo hoy khaas ah oo ku meelgaadh ah taas oo lagu siin doono daryeel dheeraad ah iyo baxnaano. Dadka qaba covid-19 ee leh daryeelka guriga ama daryeelka caafimaadka gurigu waxay sidoo kale iman karaan daryeelka kohort, haddii aysan awoodin inay kaligood ku noolaadaan guriga kuwaas oo aan laakiin qabin xannuun ay ugu baahan yihiin daryeel isbitaal. Hoyga muddada gaaban ee leh daryeelka kohort micnahiisu waa in bukaannada qaba covid-19 daaweyntooda gooni looga sooco bukaannada oo la dhigo qolal gooni ah.
Waxay magaalada Malmö bixisaa caawimo dhanka farsamada ah oo hoyga la siiyo si dadka ka weyn 70 jir ay tusaale ahaan cuntada iyo daawooyinka ugu soo iibsan karaan internedka oo ay xiriir dhijitaal ah ula lahaadaan ehelka iyo asxaabta.
Dhammaan meelaha waayeelku ku kulmaan ee magaalada Malmö si ku meelgaadh ah ayay u xidhan yihiin. Hawlaha la isku maaweeliyo waxaa laga heli karaa internetka malmo.se/motesplatserforseniors ama bogga Facebook ee Malmö goobaheeda kulanka waayeelka. Way fiican tahay sidoo kale in aad wacdid goobaha lagu kulmo 076-856 45 49 maalmaha shaqada saacadaha 08.00-16.30 haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama aad keliya rabtid inaad wax yar hadasho.
Makhaayadaha magaalada Malmö ee dadka da'da ah, waxaan ku bixinnaa oo keliya cunno ay tahay in la qaato. Saacadaha ay furan yihiin waa Isniinta ilaa Jimcaha 11.30 subaxnimo ilaa 2da duhurnimo.
Meherado badan oo ka jira gudaha LSS iyo gudaha cilmi-nafsi bulsheedka ayaa si ku meelgaadh ah uga xidhan dadweynaha, ujeeddaduna waa si looga hor tago faafitaanka suurtagalka ah ee cudurka.
Hubinta maqaayadaha iyo meheradaha qaxwaha
Magaalada Malmö waxay kormeeraysaa goobaha cuntada sida makhaayadaha cuntada iyo makhaayadaha shaaha ee Malmö ku yaala iyadoo la raacayo sida waafaqsan sharciga talaabooyinka xakamaynta caabuqa ee ku meel gaarka ah ee khuseeya goobaha makhaayadaha (Sharciga 2020:256). Maamulka deegaanka ayaa kantaroolaaya in la raacay sharciyada Hay'adda Folkhälsomyndigheten. Haddii aan loo hoggaansamin ayay magaalada Malmö bixinaysaa ganaax ama ay makhaayadaha xidhi kartaa maqaayadda/kaafateeriyda.